काठमाडौं उपत्यकामा २४६ संक्रमित थपिए :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
काठमाडौं उपत्यकामा २४६ संक्रमित थपिए
स्वास्थ्यखबर बुधबार, पुस २९, २०७७, १६:३०:००
काठमाडौं- पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं २४६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। योसँगै उपत्यकामा एक लाख २३ हजार ५३० जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज काठमाडौंमा १८९ , ललितपुरमा ३८ र भक्तपुरमा १९ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
हालसम्म काठमाडौंमा मात्र ९९ हजार ३३९ जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये ४८३ जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म ९६ हजार ५५१ जना निको भएका छन्।
ललितपुरमा १५ हजार ६८२ जना संक्रमित भएका छन्। जसमा १५२ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। ललितपुरमा १५ हजार २४० जना निको भएका छन्।
भक्तपुरमा ९ हजार ८२ संक्रमितमध्ये १११ जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म ८ हजार ८६९ जना निको भएका छन्।
आज काठमाडौंमा २ हजार ३०५ ललितपुरमा २९० र भक्तपुरमा १०२ जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
बर्दियाका थारु समुदायका ११ दशमलब ३ प्रतिशतमा सिकल सेल परिषद्ले बर्दियाका थारु समुदायमा २० हजार जनामा यो अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययनबाट २० हजार मध्ये २ हजार २५६ जना अर्थात ११ दशमलब ३ प्रतिशतलाई सिकल सेल डिस्अर्डर भएको पत्ता लागेको हो। १६ घण्टा पहिले
के सुतेको बेला धेरै घुर्नु रोग हो? किन हुन्छ? कसरी छुट्कारा पाउने? १४ मिनेट पहिले